Imanuwali yePhakheji Boeing_B737-823_Advanced_VC_FSX_ & _P3D
Umbuzo Imanuwali yePhakheji Boeing_B737-823_Advanced_VC_FSX_ & _P3D
iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule #698 by goodjohn80
Uthole leli sayithi elihle futhi walanda iphakheji ekhonjiwe ngenhla kodwa ayikho ibhukwana elifakiwe. Noma yimiphi imibono lapho ngingathola khona ibhukwana?
iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule #699 by I-FlankerAtRicoo
Ngingayifaka i-Google yePlay OpenSky (imodeli yendiza), u-Alejandro Rojas Lucenda (imodeli ye-VC), ngaphandle kwalokho i-Honeywell FMC
Okuyinto idinga uhlelo lokushayela ngaphambi kokuhlanganiswa.
Izici zezindiza ngeke zibe kude FSXokuzenzakalelayo B737_800 ....
Ithemba ukuthi lokhu kuyasiza.
I-PS: Lokhu kuyi-site enkulu kakhulu futhi kulula kakhulu ukuhamba njengelungu.
Isikhathi ukudala page: 0.178 imizuzwana